Soo galootiga aqoontooda hooseeyso oo ay aad u yar tahay fursadahooda shaqo | Somaliska
Xafiiska suuqa shadda Iswiidhan ee Arbetsförmedlingen-ka ayaa tiro koob uu dhawaan soo saaray ku sheegay in afar boqolkiiba dadyowga soo galootiga ah ee dalka ku cusub aqootooda waxbarashana ay hooseeyso ay u gudbaan waxbarashadda dadka waa weeyn kolka at helaan deganaanshaha dalka.
Tanina waxaa ay keenta in ay aad u yaraato fursadaha ay u yeelaan karaan in ay ka helaan dalka. Sidaana waxaa sheegtay haweeneyda lugu magacaabo Annie Rubensson oo u qaabilsan xafiiska shaqada is dhex galka iyadoo u warameeysay idaacadda Iswiidhan. Waxeey sheegtay ineey dhinacooda isku taxluujiyaan dhiiragelinta dadyowgaas sidii ay aqoonta la doonayo u sameeystaan iyo waxyaabaha looga rabo suuqa shaqada, iyadoo misna tilmaantay in dadku qaarkii aanu ka warqabin in ugu yaraan qofka laga rabo waxbrashadda dugsiga sare.
Dhina kale Olof Åslund, oo ah macalin ka hawlgala machadka qiimeeya suuqa shaqadda oo isna u waramayey idaacadda ayaa farta ku fiiqay in dadyowga dadka waxbarashadoodu hooseyso ay ku adag tahay ineey helaan shaqo mana ahan buu yiri oo keliya soo galootiga dalka ku cusub xitaa kuwa wadanka u dhashay. Wuxuu sheegay in ay jirto fahan darro la xirriirta markasta oo qofku aqoon korarsado in uu fursadahiisa shaqo ay iyadana kordhaan, hase ahaate qaarkood ictiqaaday in xitaa ay wax bartaan ay adag tahay ineey shaqo helaan. Halka qaar kalena ay rusan yihiin in xitaa aqoonta lafteeda aaneey daqligooda kor u qaadeyn.
Inkastoo dalkaani ka jiraan fursado shaqo oo badan, hadana dadka ajaanibta ah siiba kuwa aan laheyn aqoon sare oo heer jaamacadeed ah ayaa ku adag ineey helaan shaqo. Bulshadda soomaalida waxaa ay ka mid yihiin kuwa ugu hooseeya ee suuqa shaqada ka dhex muuqdo marka loo eeggo ajaanibta kale.